SAMOTALIS: “Waxaanu Balanqaadaynaa in aanu Ku Dhaqano Mabaadi’ida Xisbinnimo ee ina Kulmiyay”
“Waxaanu Balanqaadaynaa in aanu Ku Dhaqano Mabaadi’ida Xisbinnimo ee ina Kulmiyay”
Hargaysa (Somaliland.Org):- Guddoomiyaha Xisbiga talladda haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in hogaanka xisbigu ay dhawri doonaan sharciyadda xisbiga u yaala isla markaana ay u hogaansami doonaan kuna dhaqmi doonaan dastuurka dalka u yaala.
Waxaanu sidoo kale tilmaamay Muuse Biixi in ay u hogaansami doonaan sharciyadda xisbiga Kulmiye iyo dastuurka u yaala Jamhuuriyada Somaliland. Muuse Biixi Cabdi, oo hadal ka jeediyay shirweynihii saddexaad ee xisbul xaakimka KULMIYE oo maanta lagu soo gebagabeeyay Huteelka Maansoor ee magaaladda Hargeysa, oo uu muddo labo cisho ah ka socday. Waxaanu uga mahadnaqay ergooyinkii ka soo qaybgalay shirweynaha codka aqlabiyada ee ay ugu codeeyeen hogaanka xisbiga Kulmiye oo mar kale loo doortay in ay xibsiga hogaamiyaan shanta sanno ee soo socota.
“Anigga oo ku hadlaya Af-ka hogaanka xisbiga KULMIYE, waxaanu idiinka mahadnaqaynaa sida aad noo karaamayseen, oo aad tidhaahdeen xilka sii wadda, oo shan sanno oo hore aanu hogaanka haynay, oo aanaan odhanayn waxaanu nahay ceeb ka saliim oo hawshayadii boqolkiiba boqol ayaanu qabanay, waanu idiinka mahadnaqaynaa. Waxaan intaasi ku darayaa waxaanu qabnaa lix dayadaa xubnood ee culayskaa weyn aad saarteen 5-ta sano ee soo socota in aanu xilka hayno, inta halkan fadhida, inta dalka dibadiisa jirta, kuwii ugu fiicnaa ee ugu halganka badnaa xisbiga Kulmiye in aanu hubno inay idinku jiraan, oo boqolaal Rag iyo Haween ah oo hawshaa nagaga fiicnaan lahaa in ay idinku jiraan, laakiin haddii aad na sharafteen, oo culayskaa aad na saarteen, mar labaad ayaanu idiinka mahadnaqaynaa” ”ayuu yidhi Muuse Biixi.
Waxaanu balan qaaday Muuse Biixi in ay noqonayaan kuwo maqla una hogaansama shuruucda xisbiga u yaala iyo xubnaha kale ee xisbiga. waxaanu yidhi “Waxaan balan qaadaynaa sidaa aad noo karaamayseen in aanu idiin karaamayno, oo aanu noqono maqla hogaan xisbiga, golihiisa dhexe, xubnihiisa fulinta iyo taageerayaashiisa, oo aanu u hogaansano sharciyada xisbiga, kuna dhaqano”.
“Waxa kale oo aan balanqaadaynaa in aanu ku dhaqano mabaadii’da xisbinnimo ee ina kulmiyay, oo aan ku midaysanahay ee aasaasiga ah, ee qaran-nimadda Somaliland oo wax walba ka horeysiinayno oo aan ilaalinayno, midnimadda dadkeena, horumarinta ummaddeena iyo walaalti-nimadeena oo ah qodobadda aynu Kulmiye ku aasaasnay, waxaanu u hogaansamaynaa dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, dastuurka xisbiga Kulmiye iyo awaamiirta golaha dhexe ee xisbiga” ayuu yidhi guddoomiye Muuse Biixi Cabdi.
Labels: kulmiye, NEWS, POLITICS, Somaliland